Blog - Ofdị Mpempe akwụkwọ Barcode na Otu Esi Ahọpụta Ihe Ntugharị Barcode Kwesịrị Ekwesị
The Ofdị Barcode Printer na Olee otú Họrọ The Kwesịrị ekwesị Barcode Printer
1. Thekpụrụ ọrụ nke ngwa nbipute nke barcode
Enwere ike ịkewa ndị na-ebi akwụkwọ Barcode ụzọ abụọ a na-ebi akwụkwọ: mbipụta ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma na ntụgharị mbufe ọkụ.
(1) Dezie mbipụta ọkụ
Ọ na-ezo aka na ọkụ a na-ewepụta mgbe isi ebipụta dị ọkụ, nke a na-ebufe ya na akwụkwọ ahụ ọkụ iji mebie ya, si otú a na-ebipụta ederede na onyonyo.
Atụmatụ: igwe ọkụ, igwe obibi akwụkwọ, ihe oriri dị ọnụ ala, nchekwa nchekwa ederede aka, dị mfe ịgbanwe agba na anyanwụ.
(2) Kwes nyefe-ebi akwụkwọ
A na-ekpo ọkụ site na nke ugbu a na mgbochi nke mbipụta isi ma kpoo ya iji nyefee mkpuchi toner na teepu carbon na akwụkwọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ.
Atụmatụ: N'ihi na nhọrọ nke carbon ihe, kpọọ e biri ebi na dị iche iche ihe nwere ike iguzo nke oge na-agaghị nkwarụ ruo ogologo oge. Enwere ike ịchekwa ederede ahụ ogologo oge, ọ naghị adị mfe iyi na akwa, ọ naghị adị mfe nrụrụ ma gbanwee agba, wdg, nke dị mfe maka ndị ọrụ iji.
2. Mbido nke barcode ngwa nbipute
(1) Mbadamba mkpanaka mkpanaka
N'iji mpempe akwụkwọ eji ebi akwụkwọ, ị nwere ike ịmepụta aha, akwụkwọ azụmahịa, na akụkọ dị mfe na ngwa nbipute dị fechaa, nke na-adịgide adịgide. Mobile na-ebi akwụkwọ na-ebelata oge n'iyi, melite ziri ezi na ike ga-eji n'ebe ọ bụla.
(2) Desktọpụ barcode ngwa nbipute
Desktop barcode na-ebi akwụkwọ bụ n'ozuzu plastic aka uwe na-ebi akwụkwọ. Ha nwere ike ibipụta akara mmado buru ibu dịka 110mm ma ọ bụ 118mm. Ọ bụrụ n’ịchọghị ibipụta ihe karịrị ederede 2,500 kwa ụbọchị, ha dị mma maka akara ngosi dị obere na ebe nwere oghere.
(3) Industrial barcode ngwa nbipute
Ọ bụrụ n’ịchọrọ onye nbipute ihe na-arụ ọrụ na kọlọtọ ruru unyi ma ọ bụ n’ebe a na-arụ ọrụ, ịkwesịrị ịtụle ngwa nzipute nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe Printing ọsọ, elu mkpebi, nwere ike na-arụ ọrụ na ọnọdụ siri ike, ike ime mgbanwe, isi obibi akwụkwọ karịa nkịtị azụmahịa igwe inogide, ogologo ọrụ ndụ, àgwà bụ dịtụ mụ, ya mere dị ka ndị a uru nke ngwa nbipute, ma ọ bụrụ na ndị na-ebi akwụkwọ olu bụ nnukwu, kwesịrị ịdị nyere mkpa.
Etu ị ga-esi choputa ihe ntinye ederede nke ịchọrọ:
1. Ọnụ ọgụgụ nke obibi
Ọ bụrụ na ịchọrọ ibipụta ihe gbasara aha 1000 kwa ụbọchị, a na-atụ aro ka ị zụta ihe ntanetị desktọọpụ desktọọpụ desktọọpụ, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ desktọọpụ na ikike carbon belt dị ntakịrị, ụdị ngwaahịa ahụ pere mpe, dabara adaba maka ọfịs.
2. Label obosara
Mbipụta obosara na-ezo aka n'ogo kachasị obosara na ngwa nbipute nke akara ngosi nwere ike ibipụta. Nnukwu obosara nwere ike ibipụta obere akara, mana obere obosara enweghi ike ibipụta nnukwu akara. Ọkọlọtọ barcode na-ebi akwụkwọ nwere 4 nke anụ ọhịa ahụ na-ebipụta nso, yana 5 nke anụ ọhịa ahụ, 6 nke anụ ọhịa ahụ na 8 nke anụ ọhịa ahụ obosara. Nhọrọ izugbe nke 4 inch printer ezuola iji.
WINPAL nwere 5 akwụkwọ anọ dị ugbu a na anụ ọhịa anọ: WP300E, WP300D, WPB200, WP-T3A, WP300A.
3. Printing ọsọ
The ebi akwụkwọ ọsọ nke izugbe barcode ngwa nbipute bụ 2-6 sentimita asatọ kwa abụọ, na ngwa nbipute na elu ọsọ nwere ike ibipute 8-12 sentimita kwa abụọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ibipụta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke akara mmado na obere oge, ngwa nbipute nwere oke ọsọ dị mma. WINPAL na ngwa nbipute ibipute na gbapụrụ ọsọ sitere na 2 nke anụ ọhịa ahụ na 12 nke anụ ọhịa ahụ.
4. Obibi ihe
Mbipụta mkpebi nke barcode igwe na-adịkarị kewara 203 DPI, 300 DPI na 600 DPI. Ndị na-ebipụta mkpebi dị elu pụtara na aha njirimara ị na-ebipụta, ihe ngosi ka mma.
WINPAL barcode ndị na-ebi akwụkwọ na-akwado mkpebi 203 DPI ma ọ bụ 300 DPI, nke na-egbo mkpa gị kpamkpam.
5. Obibi iwu
Ndị na-ebi akwụkwọ nwere asụsụ igwe ha, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-ebi akwụkwọ barcode na ahịa nwere ike iji naanị otu asụsụ ebi akwụkwọ, nwere ike iji iwu mbipụta nke ha.
WINPAL barcode ngwa nbipute na-akwado ọtụtụ mbipụta akwụkwọ iwu, dịka TSPL, EPL, ZPL, DPL wdg.
6. Mbipụta interface
The interface nke barcode ngwa nbipute n'ozuzu nwere PARALLEL n'ọdụ ụgbọ mmiri, Usoro ọdụ ụgbọ mmiri, USB n'ọdụ ụgbọ mmiri na LAN n'ọdụ ụgbọ mmiri. Mana imirikiti ndị na-ebi akwụkwọ nwere naanị otu ihu a. Ọ bụrụ na ibipụta site na interface akọwapụtara, jiri ngwa nbipute na interface ahụ.
WINPAL barcode ngwa nbipute na-akwado ihu Bluetooth na WiFi, na-eme ka ebipụta dị mfe.
Wifi Receipt Printer, Nnata Printer, Onye na-ahụ maka nnata ihe ntanye 80mm, Onye na-ebipụta ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, 80mm Kwesie Nnata Printer, Nnata Mobile Printer,